Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Eziokwu -> Ezigbo agwa
Ezigbo agwa: [Eziokwu]
2 KỌRINT 8:21
Ọ bụ ọchịchọ anyị ime ihe ọma, ọ bụghị nanị nꞌihu Chineke, kama nꞌihu ndị mmadụ kwa.
1 PITA 3:10-12
 Nꞌihi na akwụkwọ nsọ kwuru sị, “Onye ọ bụla chọrọ ibi ndụ dị ụtọ, nke chọrọ ịhụ ụbọchị ọma ahụ anya, ya kwụsị ikwu okwu ọjọọ na okwu ụgha. Ya sitekwa nꞌajọ omume ya tụgharịa bido ime ezi ihe. Ya gbalịakwa ibi ndụ udo, ma na-agbasokwa ndụ udo. Nꞌihi na Chineke si nꞌelu na-ele ndị ezi omume anya mgbe nile, ọ na-egekwa ntị nꞌekpere ha, ma ọ na-ele ndị ajọ omume anya ọjọọ.”